Ardada soo galootiga oo iskuulada ku liita | Somaliska
Natiijada ardada ku nool xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ayaa aad hoos ugu dhacday ayadoo baaritaan lagu sameeyay 38 xaafadood oo ka tirsan Sweden ay soo bandhigtay arintaas. Kajsa Yang-Hansen oo ka tirsan jaamacada Göteborg ayaa arintaan baaritaan ku sameysay ayadoo sheegtay in sababta ay natiijada ardada hoos ugu dhacday ay tahay in ay siyaaday kala qeybsanaanta u dhaxeysa ardada Swedishka ah iyo kuwa so galootiga ah. Ayadoo sidoo kale sheegtay in ay arintaan keentay macalimiinta oo aan jecleyn in ay ka shaqeeyaan goobaha ay u badanyihiin dadka soo galootiga ah. Goobaha baaritaanka lagu sameeyay waxaa ka mid ah xaafada ay Soomaalida u badanyihiin ee Rinkeby, Stockholm.
Natiijada ardada ku nool xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ayaa aad hoos ugu dhacday ayadoo baaritaan lagu sameeyay 38 xaafadood oo ka tirsan Sweden ay soo bandhigtay arintaas.
Kajsa Yang-Hansen oo ka tirsan jaamacada Göteborg ayaa arintaan baaritaan ku sameysay ayadoo sheegtay in sababta ay natiijada ardada hoos ugu dhacday ay tahay in ay siyaaday kala qeybsanaanta u dhaxeysa ardada Swedishka ah iyo kuwa so galootiga ah.
Ayadoo sidoo kale sheegtay in ay arintaan keentay macalimiinta oo aan jecleyn in ay ka shaqeeyaan goobaha ay u badanyihiin dadka soo galootiga ah.
Goobaha baaritaanka lagu sameeyay waxaa ka mid ah xaafada ay Soomaalida u badanyihiin ee Rinkeby, Stockholm.
Maxaa waxbarasha ah qoff cunugiisi/hooyadiis/aaboowgiis iwm ay maqan yihiin isla markaana biri gashoow gashoow lakulmo kurjad waraaqa ah oo avslå kan ej överklags ku qoran yihiin maxoow bara karaaa ?
Mararka qaar xataa waxaa dhacdo in aan meshi aan uga qori lahay xaanshada miiska uga qoro waxa anoo u heeysto buugi ama aan kobo sabdi/axad ay u yaqaaaniin somalida qaadto yacni koba kala kaaam ah maskax la,aan jawiya iyo arimo intaas sii dheer oo ay u sabab tahay kalamaqnaashaha qows ahaneeed. Jag hoppas en dag att kunna leva tillsammns